China Double umjovo udini Umkhiqizi kanye Umthengisi I-Mestech
Double umjovo udini inqubo yokubumba epulasitiki lapho amasethi amabili okubumba ejojowe ngasikhathi sinye emshinini wokujova owodwa ukwakha ingxenye eyodwa yezinto ezimbili zepulasitiki.
Double umjovo udini (ubizwa nangokuthi double shot udini, ezimbili-umbala umjovo).
Double umjovo udini inqubo plastic udini lapho amasethi amabili isikhunta zifakwa kanyekanye injected emshinini umjovo efanayo ukwakha ingxenye eyodwa izinto ezimbili ezahlukene plastic. Kwesinye isikhathi izinto ezimbili zinemibala ehlukene, kwesinye isikhathi izinto ezimbili ziba nobulukhuni nobuthakathaka obuhlukile, ngaleyo ndlela kutholakale izakhiwo zemishini ezidingekayo nobuhle bomkhiqizo.
Ukusetshenziswa double-umjovo plastic isikhunta kanye izingxenye
Izingxenye zepulasitiki ezikhiqizwe yize ukufakwa kwenaliti kabili kusetshenziswe kabanzi emikhiqizweni kagesi, amathuluzi kagesi, imikhiqizo yezokwelapha, izinto zasendlini, amathoyizi cishe nazo zonke ezinye izinkambu zepulasitiki. Ukukhiqizwa nokubunjwa kwesikhunta esinemibala emibili, kanye nocwaningo kanye nokuthuthukiswa kwemishini yokubumba umjovo ombaxambili kanye nezinto zokusetshenziswa zokubumba umjovo ombaxambili nombala nakho kuthuthuke ngokushesha.
Khombisa ikesi lezingxenye zomjovo ophindwe kabili
Kusetshenziswa izinhlobo ezimbili zepulasitiki, kanti imikhiqizo yepulasitiki engahlukaniswa ngokusobala phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zepulasitiki ibizwa ngezingxenye zomjovo ophindwe kabili.
Uyini inzuzo double umjovo udini?
Uma kuqhathaniswa bendabuko umjovo udini, ombaxambili impahla co-umjovo udini inqubo has izinzuzo ezilandelayo:
1. Izendlalelo zangaphakathi nezangaphandle zezingxenye zamukela izinto ezahlukahlukene ezinezici ezahlukahlukene, njengalezo ezinamandla amahle kusendlalelo sangaphakathi nalezo ezinombala noma okusanhlamvu ngaphandle, ukuze zithole ukusebenza okuphelele nomphumela wokubukeka.
2. Ukudidiyelwa kokusebenza okuqinile: Ingxenye enkulu yengxenye isebenzisa izinto ezilukhuni, indawo ehambelana nomhlangano isebenzisa i-resin ethambile enwebeka (i-TPU, i-TPE) ingadlala umphumela omuhle kakhulu wokufaka uphawu kumkhiqizo, njengokungena kwamanzi, ukufakazela uthuli.
3. Ngokuya ngezici ezahlukahlukene zokusetshenziswa, njengobubanzi bengxenye yezinsimbi ezisindayo zisebenzisa i-resin epulasitiki ethambile, umzimba noma ingqikithi yengxenye isebenzisa i-resin epulasitiki enzima noma ipulasitiki enegwebu inganciphisa isisindo.
4. Izinto ezisemqoka ezisezingeni eliphansi zingasetshenziswa ukunciphisa izindleko.
5. Izinto ezisemqoka zezingxenye zingasebenzisa izakhiwo ezibizayo nezikhethekile zomhlaba, njengokuphazanyiswa kwe-anti-electromagnetic, ukuqhuba okuphezulu nezinye izinto ukukhulisa ukusebenza komkhiqizo.
5. Ingaphezulu noma ingqikithi yezingxenye zingenziwa ngezinto ezibizayo ezinezakhiwo ezikhethekile, njengokuphazanyiswa kwe-electromagnetic, conductivity ephezulu nezinye izinto zokwengeza ukusebenza komkhiqizo.
6. Ukuxubana okufanele kwezinto ezisetshenziswayo ze-cortical nezingumgogodla kunganciphisa ukucindezela okusele, kwandise amandla womshini noma izakhiwo ezingaphezulu zezingxenye.
7. Uma kuqhathaniswa nokwedlula ngokweqile, kunezinzuzo ezinkulu ngekhwalithi, izindleko kanye nokukhiqiza.
Ukwehluleka kokujola kabili komjovo
1. Kuyadingeka ukuthi utshale imali ekuthengeni umshini wokubumba onemijovo emibili.
2. Ukufaniswa kwesikhunta somjovo ophindwe kabili kudinga ukucacisa: isikhunta sangemuva sinezidingo ezifanayo. Lapho umkhiqizo unezinguquko zedizayini, zombili izikhunta kufanele zenze izinguquko ezifanayo ukuqinisekisa okufanayo. Lokhu kungeza umthwalo wokunakekelwa kwabafa.
3. Umjovo wokubumba umjovo ophindwe kabili ukuthi izigaxa ezimbili zesikhunta zabelana ngesikhala namandla omshini ofanayo wokujova umjovo, ngakho-ke imikhiqizo emikhulu ayikwazi ukujova.
Umehluko phakathi kwenqubo yokubumba umjovo kabili nenqubo yokweqa ngokweqile
Double umjovo udini futhi overmolding kokubili secondary umjovo udini, kodwa zihluke kakhulu.
1. Overmolding inqubo isikhunta, owaziwa nangokuthi udini yesibili, kwenziwa imishini ejwayelekile umjovo udini. Umkhiqizo wakheka ngezigaba ezimbili. Ngemuva kokuthi umkhiqizo ususiwe kuqoqo elilodwa lesikhunta, ufakwa kolunye ucezu lwesikhunta ekubunjweni komjovo wesibili. Ngakho-ke, ezejwayelekile umjovo udini umshini isetshenziselwa inqubo overmolding.
2. Umjovo ophindwe kabili ukuthi izinhlobo ezimbili zezinto zepulasitiki zijojowe emshinini ofanayo wokujova umjovo, ukwakha kabili, kepha umkhiqizo uphuma kanye kuphela. Ngokuvamile, lolu hlobo inqubo yokubumba ubizwa nangokuthi kabili impahla umjovo udini, okuyinto ngokuvamile ligcwaliswe amasethi amabili isikhunta futhi kudinga okhethekile double-umjovo udini umshini.
3. Double umjovo udini imodi eqhubekayo yokukhiqiza. Ayinakho ukusebenza kokukhipha nokubeka izingxenye phakathi, konga isikhathi nephutha lokufaka kabusha izingxenye, kunciphisa kakhulu izinga lokukhiqiza okungalungile, futhi kuthuthukisa kakhulu ikhwalithi yomkhiqizo nokusebenza kahle kokukhiqiza uma kuqhathaniswa nenqubo yokweqa ngokweqile.
4. Inqubo yokweqisa ifanele umjovo wokubumba imikhiqizo enezidingo ezisezingeni eliphansi kanye nama-oda amancane. Kunqunyelwe ukucaciswa komshini wokufaka umjovo ophindwe kabili, ngokuvamile akulungele umjovo wokubumba izingxenye ezinkulu.
5. Izikhunta ezimbili zangaphambili zomjovo omjovo ophindwe kabili kufanele zifane, futhi isikhunta sokugoqa asinayo le mfuneko. Ngakho-ke, ukucacisa kanye nezindleko zesikhunta somjovo ophindwe kabili kuphakeme kunaleso sokubunjiwe komjovo ohlanganisiwe.
Amathiphu wenqubo yokubumba kabili umjovo:
1. Enkambeni yokubumba ngomjovo ophindwe kabili, kunezinto ezine ezibalulekile: umshini wokubumba umjovo onemijovo emibili, isikhunta esinemijovo emibili, izinto zepulasitiki ezifanele kanye nengxenye yokwakheka enengqondo.
2. Ukukhethwa Kokusebenza Kombumbulu Womjovo ophindwe kabili Nobunzima Kokubumba Kufanele kube khona umehluko othile wokushisa phakathi kwendawo yokuncibilika yezinhlobo ezimbili zezinto zokwakha umjovo womjovo wemibala emibili. Ngokuvamile, kunconywa ukuthi iphuzu lokuncibilika kwento yokuqala yomjovo liphakeme kunaleyo yesithako somjovo wesibili, nokuthi iphuzu lokuncibilika kwento yokuqala yomjovo liphakeme kunaleyo yomjovo wesibili.
3. Ukulandelana komjovo ngezinto ezisobala nezingabonakali: isibhamu sokuqala senziwe ngezinto ezingabonakali, kanti esesibili senziwe ngezinto ezisobala. Isibonelo, izinto ezingabonakali obala zivame ukuba yi-PC enezinga lokushisa eliphakeme, futhi i-PMMA noma i-PC isetshenziselwa okokusebenza okusobala kwesibili. I-PC idinga ukuvikelwa ngokufafaza i-UV. I-PMMA ingakhetha i-UV noma iqine. Uma kunezinhlamvu ebusweni, kufanele zikhethe i-UV.
Uyini kabili-umjovo udini umshini?
Umshini wokubumba umjovo onemiphongolo emibili nohlelo lokujova kanye nendlela yokuguqula indawo yesikhunta ubizwa ngokuthi umshini wokubumba umjovo ophindwe kabili, osetshenziselwa umjovo wokubumba ombaxambili. Umjovo udini imishini ngokuvamile babe izinhlobo ezimbili: parallel umjovo udini umshini umjovo isikulufa futhi mpo umjovo udini umshini umjovo isikulufa.
Kuyini isikhunta esinemijovo emibili?
Isikhunta esifaka izinhlobo ezimbili zepulasitiki ngokulandelana futhi siveze imikhiqizo enemibala emibili sibizwa ngokuthi isikhunta semibala emibili. Izikhunta zomjovo wemibala emibili imvamisa amasethi amabili okubumba engxenyeni eyodwa, ahambelana nesibhamu sokuqala nesesibili ngokulandelana. Ukufa kwangemuva (ukufa kwabesilisa) kwalaba ababili abafayo kuyafana, kepha okuphambili kufa (abesifazane bafa) kuhlukile.
Izikhunta zomjovo ophindwe kabili kufanele zifakwe kumshini wokubumba onemijovo emibili ukuze ukhiqize ngokwejwayelekile.
Amathiphu ekwakhiweni kwesikhunta somjovo ophindwe kabili
1. Isikhunta core kanye umgodi
Ingxenye eyakhayo yesikhunta esinemijovo ephindwe kabili iyafana ngokufana nesikhunta somjovo ojwayelekile. Umehluko ukuthi isibhakela sesikhunta somjovo ezindaweni ezimbili kufanele sithathwe njengesifanayo, futhi isikhunta se-concave kufanele sisebenzisane kahle nezibhakela ezimbili. Ngokuvamile, lolu hlobo lwezingxenye zepulasitiki lincane.
ISIKHUNGO SOKUFAKA AMABILI
2. Indlela yokukhipha
Njengoba izingxenye zepulasitiki ezinemibala emibili zingacekelwa phansi kuphela ngemuva komjovo wesibili, indlela yokucekela phansi eyinsimbi yomjovo oyinhloko ngeke isebenze. Kumshini wokujova ojikelezayo ovundlile, umshini wokukhipha umshini womjovo ungasetshenziselwa ukukhipha ukukhishwa. Okomshini wokujikisa ujikeleze mpo, umshini wokukhipha umshini womjovo awunakusetshenziswa. Umshini wokukhipha ukukhishwa kwe-Hydraulic ejection ejection ungasethwa etafuleni elijikelezayo.
3. Uhlelo Lokushaya
Ngoba ukubumba komjovo ophindwe kabili, uhlelo lwesango luhlukaniswe ngohlelo olulodwa lomjovo nohlelo lwesibili lomjovo, ngokulandelana kusuka kumadivayisi amabili okubumba umjovo.
4, Ukungaguquguquki kwezisekelo zesikhunta Ngoba indlela yokubumba yenaliti ekhethekile ikhethekile, idinga ukubambisana futhi ixhumane, ngakho-ke ubukhulu nokunemba kwamapheya amabili amadivayisi wokuqondisa kufanele afe. Ngokuvundulula umjovo ojikelezayo ovundlile, ubude bokuvala besikhunta kufanele bufane, futhi nendawo yesikhunta ezimbili kufanele ibe sendaweni efanayo eguqukayo, umehluko kube ngu-180. Kumshini wokubumba umjovo ojikelezayo uqonde, amapheya amabili wesikhunta kufanele ibe kwi-eksisi efanayo.
Ukuthuthukiswa kwe-double-injection molding
Kusukela kuzici nokusetshenziswa kwe-multi-color injection injection kanye ne-dual-material co-injection molding, kungabonakala ukuthi kuzoba nomkhuba wokushintsha kancane kancane inqubo yendabuko yokubumba umjovo ngokuzayo. Innovative umjovo udini ubuchwepheshe hhayi nje kuphela ngcono ngokunemba inqubo umjovo udini, kodwa futhi kuvula insimu yenqubo umjovo udini. Imishini yokukhipha izinto ezintsha nezinqubo zanele ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo zemikhiqizo ehlukahlukene, esezingeni eliphakeme futhi ephezulu enezelwe.
IMestech inikela ngomjovo ophindwe kabili kumakesi ezimoto, amagobolondo wemishini ephathwa ngesandla, izipikha izindlu, izinkinobho zokhiye, izibambo neminye imikhiqizo enemibala emibili noma emibili iminyaka, sicela uxhumane nathi uma kunesidingo.
Langaphambilini Umshini womjovo wePlastiki
Olandelayo: Izingxenye zepulasitiki zesibani esingenamthunzi
Ukuphrinta kwe-Silkscreen nomhlobiso wephethini we ...
Isipikha somsindo izindlu zepulasitiki
Izingxenye zepulasitiki zesibani esingenamthunzi